अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउन कति कठिन ? – आफ्नो प्रेरक संसार
Bibas chetan — १७ चैत्र २०७४, शनिबार ०३:४३0comment
काठमाडौं। धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले बिहीबार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने घोषणा गरेपछि खेल प्रेमीमा तरंग पैदा गरेको छ ।
नेपालमा विभिन्न काल खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउन पर्छ भनेर छलफल नभएका पनि होइनन् । तर क्यान निलम्बनमा पर्नु अघि यस विषयमा क्यान पदाधिकारीहरुको ध्यान नगएका कारण नेपालमा मैदान बन्न नसकेको राष्ट्रिय खेलाडीहरु स्वयं बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा सारा नेपालीको मन जित्न सफल धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने घोषणा गर्नु सानो साहसको विषय होइन् ।
यसअघि चार स्थानमा विभिन्न घटनाबाट पीडित नागरिकका लागि नमूना बस्ती बनाइसकेको फाउण्डेसनले क्रिकेट मैदान बनाउन सकिन्छ, यो विषय चुनौती होइन भनेको छ । फाउण्डेसनका अध्यक्ष चर्चित कलाकार सितारमा कट्टेल (धुर्मुसले) भने ‘हामीले देशको लागि क्रिकेट मैदान बनाउन लागेका हौं । प्राविधिक विषयमा छलफल जारी छ । हामीलाई लागतको चुनौती छैन् । जति लागत पर्छ जसरी पनि जुटाउँछौं । त्यसैले क्रिकेट मैदान बन्छ । ढुक्क हुनुस् ।’
बिहीबार फाउण्डेसनको फेसबुक पेजमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने घोषणा भएको थियो । कट्टेलले यस कार्य देशकै अभियान भएकाले सबैले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । उनले चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकेट स्टेडियम निर्माण समिति गठन गरी प्राविधिक टोली बन्ने जानकारी दिए । जसमा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी, खेल पत्रकार, बुद्धिजीवी लगायत सम्बन्धित सबैलाई समेट्ने र त्यसले आइसीसीको मापदण्ड अनुसार क्रिकेट मैदानको निर्माण थालनी गर्ने उनको भनाई छ ।
नेपालले मैदान बनाउन सक्छ: छुम्बी लामा
नेपाली क्रिकेट खेलका जानकार तथा निलम्बित क्यानका पूर्व प्रशासनिक प्रमुख छुम्बी लामा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउन चुनौती नरहेको बताउँछन् । क्यान निलम्बनमा परेतापनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकारको मातहतमा रही नेपालमै क्रिकेट मैदान बनाउन सकिने लामाको भनाई छ ।
खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार बनाउन नेपालले कसैसँग अनुमति माग्न नपर्ने भएकाले त्यसका लागि नेपालले आइसीसीसँग अनुमति पनि माग्न नपर्ने उनले बताए । मैदान कहाँ बनाउने, त्यसको लागत कति लाग्छ ? भन्ने विषय चुनौती नभएकाले इच्छा शक्ति भए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान नेपालमा चाँडै बन्ने उनले बताए । लामाले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनको क्रिकेट स्टेडियम बनाउने कार्यको स्वागत गर्दै आफूले भरपुर सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कप्तान खड्का के भन्छन् ?
नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले पनि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले क्रिकेट मैदान बनाउन गरेको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेका छन् । इतिहासमै पहिलो पटक एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाइसकेको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान जरुरी रहेको समयमा क्रिकेट मैदान बनाउने कुराले सम्पुर्ण खेलाडी खुशी भएको उनको भनाई छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान भएपछि नेपाली क्रिकेट अझ फस्टाउने खड्को तर्क छ । उनले भने ‘हामीले एक दिवसीय मान्यता पाइसकेका छौं । यस्तोमा कैयौं बलिया राष्ट्र हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् । अभ्यास खेल खेल्न चाहन्छन् । राम्रो मैदान नभएका कारण पनि नेपाल अहिलेसम्म पछि परेको थियो । मैदान बनेपछि हामीले उनीहरुसँग खुलेर खेल्न सक्छौं । यसले हाम्रो क्रिकेटको कौशल बढ्ने छ भने कैयौं प्रतिभावान खेलाडी जन्मनेछन् ।” फाउण्डेसनले आफूसँग बारम्बार क्रिकेट मैदान बनाउने विषयमा परामर्श गरेको पनि उनले बताए । उनले पनि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनलाई शत प्रतिशत सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
हामी सहयोग गर्छौ: एनसीएसएस
नेपाली क्रिकेट क्षेत्रको संकटमा साथ तथा विकृतीमा खबरदारी गर्दै आएको नेपाली क्रिकेट समर्थक समाज एनसीएसएसले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने घोषणा गरेपछि आफूहरु सबैभन्दा धेरै खुशी भएको बताएका छन् ।
समाजका सचिव विमल पौडेलले यसअघि फाउण्डेसनको बस्ती निर्माणमा आफूहरुले सहयोग गरेको बताउदै यसबेला कुरा क्रिकेटसँग जोडिएकाले जस्तोसुकै सहयोग गर्ने बताए । पौडेलले भने “हामी अब फाउण्डेसनको मातहतमा रहेर काम गर्न आतुर भएका छौं । सहयोग जुटाउन होस या श्रम दान गर्न हामी जुनसुकै घडीमा साथ दिनेछौं ।”